अंडाकार ZINC प्लेट्ड फ्ल्यांज निर्माताहरू र आपूर्तिकर्ताहरू - चीन कारखाना - आईगुओ
घर > उत्पादनहरू > विशेष निकलान > अंडाकार फ्ल्यांज > अंडाकार ZINC मैला झण्डा
हामी ओवल ZINC प्लेटिड फ्ल्यांज आपूर्ति गर्दछौं। यस प्रकारको निकारा कार्बन स्टीलको बनेको छ। हाम्रो कम्पनीले स्टील फ्ल्याज केवल जीबी स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्न सक्दछ, एएनएसआई, ASME मानक, DIN, BS EN मानक र GOST, JIS, Sans, मानक. हामी हाम्रो ग्राहकहरु र साझेदारहरु लाई मानक वा कस्टममा गुणवत्ता पाइप फिटिंग आपूर्ति गर्न कोसिस गरिरहनेछौं।
हामी ओवल ZINC प्लेटिड फ्ल्यांज आपूर्ति गर्दछौं। यस प्रकारको निकारा कार्बन स्टीलको बनेको छ। हाम्रो कम्पनीले स्टील फ्ल्याज केवल जीबी स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्न सक्दछ, एएनएसआई, म जस्तै मानक, DIN, BS EN मानक र GOST, JIS, Sans, मानक. हामी हाम्रो ग्राहकहरु र साझेदारहरु लाई मानक वा कस्टममा गुणवत्ता पाइप फिटिंग आपूर्ति गर्न कोसिस गरिरहनेछौं।
१.अउवल ZINC प्लेटिड फ्ल्यांजको उत्पादन परिचय
यो ओवल ZINC प्लेटिड फ्ल्यांज शीर्ष गुणस्तरको कार्बन स्टील थियो। हामीले धेरै वर्षहरू युरोप र अमेरिकाको बजारलाई ढाक्दै हामी आफैलाई समर्पित गर्यौं। हामी चीनमा तपाईको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौं।
२.अंडाकार ZINC प्लेट्ड फ्ल्यान्जको उत्पादन प्यारामिटर (विशिष्टता)
DN16~2000, १/२ "~150"
१ #० # ~ २0००० #, PN16 ~ PN200
म जस्तै,एएनएसआई B16,,BS,EN1092, JIS,DIN, UNI, AS2129, Sans, Gost1280, आदि
पेट्रोलियम, रसायन, उर्जा, ग्यास, धातु विज्ञान, शिपबिल्डिंग, निर्माण, तेल आदि
P.उत्पाद ZINC मर्मत गरिएको झण्डा को उत्पादन सुविधा र अनुप्रयोग
Best selling Oval flange is used in पेट्रोलियम, रसायन, उर्जा, ग्यास, धातु विज्ञान, शिपबिल्डिंग, निर्माण, तेल आदि
P.उत्पादयोग्यताअंडाकार ZINC मैला झण्डा
5.Deliver,Shipping And Servingअंडाकार ZINC मैला झण्डा
प्याकिंग: प्लाईवुड प्यालेट वा फ्युमिगेट काठ प्यालेट वा केस
पोर्ट: क्विंगदाओ पोर्ट
Q: कसरी गुणवत्ताको लागि परीक्षण बनाउने?
A: पहिलो उपस्थिति परीक्षण, त्यसपछि प्रवेश योग्य परीक्षण, अल्ट्रासोनिक परीक्षण र अल्ट्रासोनिक परीक्षण।
Q: कसरी एन्टीसेप्टिक उपचार गर्ने?
A: पहिले धुलो हटाउनुहोस् र त्यसपछि जस्ती, एन्टी-जंग कोटिंग तेल खनन प्रतिरोध बलियो बनाउन।
प्रश्न: के तपाईं यस उत्पादनको मूल्य उद्धृत गर्न सक्नुहुन्छ?
हट ट्याग: ओवल ZINC चढ़ाएको निकलापन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, अनुकूलित, चीन, चीनमा निर्मित, छुट, कम मूल्य, मूल्य सूची, TUV, गुणवत्ता